Fandriana aretim-pandeha marobe B-45
B-45 Fandrihana aretin'ny fefy be dia be: 1800 (L) × 600 (W) × 650/895 (H) mm Ny latabatra obstetric marobe dia natao ho an'ny fandefasana, ny fanalan-jaza ary ny fizika gynecological. Izy io dia voarindra amin'ny fandidiana mora, toekarena, fiarovana ary fahatokisana. Izy io dia ahitana ny endriky ny fandriana, ny lambam-pandriana ary ny faladiany fandriana Ny lafiny fandriana dia ahitana fizarana aoriana, fizarana seza ary fizarana tongotra. Ny hetsika miorina amin'ny lafiny aoriana sy ny aoriana ary ny aoriana aoriana dia ny fehezin'entana mandehandeha izay mifehy amin'ny kodiarana tanana, izay mahatonga ...
Fandriana epoxy coet matevina B-43-1
Habe: 1680mm (L) * 620mm (W) * 800mm (H) Fisehoan-javatra lehibe: 1. endrika coated cooxy, vita amin'ny polyurethane matanjaka; 2.ny fizarana telo, fialan-tsasatra miverina (namboarina tamin'ny lohataona gazy), fihenan-tsasatra amin'ny lohalika (fehezin'ny rafitry ny mekanika gear); 3. Fitaovana fanohanana tongotra roa, miaraka amin'ny lovia SS iray eo ambanin'ny latabatra 4. Fototra amin'ny tongotra an-tongotra, tongotra miaraka amin'ny baomba anti-feo 5. Ny fanamboarana entana mandondona.
Famatorana vy matevina B-42-1
habe: 1680mm (L) * 600mm (W) * 800mm (H) Fomba lehibe: 1. ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy, ny lamba vita amin'ny polyurethane avo lenta; 2. Fizarana telo, fialan-tsasatra (averina amin'ny alàlan'ny lohataona gazy), fihenan-tsasatra amin'ny lohalika (fehezin'ny rafitry ny mekanika gear); 3. Fitaovana fanohanana tongotra roa, miaraka amin'ny lovia SS iray eo ambanin'ny latabatra 4. Fototra amin'ny tongotra an-tongotra, tongotra miaraka amin'ny baomba anti-feo 5. Ny fanamboarana entana mandondona.
B-48 C1-Fampitan-dàlana mahazatra board piandohan'ny ABS (1) ○ Fiaran-dàfan'ny ABS misy damping (2) ○ Motors (3) ○ Manohana (2) ○ Mitrosa asa (2) ○ IV lavaka Pole (2) ○ Ivotoerana manankarena. fanakatonana mpanidy (4) ○ mpanidy mpanidy mihidy mpanankarena （4）
B-48A1 Ny efitrano LDR dia efitrano iray natokana ho an'ny asa, fanaterana, fanarenana ary fanamafisana (LDRP). Ny fitaovana amin'ny fandriana io dia mety amin'ny fizotry ny fiterahana sy ny fiterahana afa-tsy ny fizarana cesarean sy ny fanaterana anesthesia ankapobeny. Ny efitrano fandefasana tokana rehetra dia natao ho an'ny làlam-piterahana manontolo hatrany am-bohoka ka hatramin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana neonatal, ary afaka mitantana ny fahasarotana. Fandriana LDR, satria ny fitaovana fanalahidy ao amin'ny efitrano tokana dia azo zahana tanteraka hanentana ny predelivery sy ny serivisy fanaterana samihafa ...